Sevha $ 50 pane Yako YekushambadziraProfs PRO Hungu | Martech Zone
Kana iwe usati watarisa kumwe kunoshamisa mabhenefiti uye makosi anowanikwa kuburikidza KushambadziraProf, iwe unofanirwa. Kwemakore anopfuura gumi, KushambadziraProfs yakaratidza nyanzvi izvo zvinoshanda chaizvo - uye chii chisingashande - mumusika nhasi.
Basic Nhengo inosanganisira kuwana kune rakapfuma raibhurari yezvinyorwa uye matsamba. PRO Nhengo inowedzera sei-kumisangano, ipfupi Tora gumi mawebhusaiti, inokurudzira Nyaya Yekuunganidza Unganidzo, batsira SmartTools, nezvimwe. Joinha nhasi, uye dzidza kuti sei vanopfuura 10 nyanzvi vanovimba neMarketProfs kuvabatsira kuvaka zvirongwa zvekushambadza zvinoshanda.
Join nhasi uchishandisa kodhi yeponi DKVIP uye iwe uchagamuchira madhora makumi mashanu kubva pamubhadharo Wenhengo yePRO yemadhora mazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe!
IInternet izere nemazano ekutengesa, mazano ekushambadzira, uye nyanzvi dzekushambadzira - asi zvizhinji zvacho zviri kunze imarara chaiwo kana kuti zvinokanganisa kunzwisisa. YekushambadziraProfs edhisheni timu inocheka kuburikidza neiyi yese ruzha rwekushambadzira kuti iwane nyanzvi uye vari-mune-migero vatengesi vanoziva zvavari kutaura nezvazvo. Ivo vanotora yavo yekuziva-uye voisanganisa ne yavo yekushambadzira smart kuti iishandure kuita inoshanda mazano iwe aunogona chaizvo kushandisa kuburikidza edu matsamba, misangano, misangano, podcast, zvinyorwa, uye webcasts.
Ivo vanofanirwa kunge vachizviita nemazvo, ivo mamirioni-madhora kambani inoshumira nharaunda yevanopfuura 492,000 vemabhizimusi, varidzi-mabhizinesi madiki, uye vashambadzi vehunyanzvi kumakambani makuru epasirese.
Dzokorora: Gadzira zvirinani zvirimo Kazhinji